ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိကိုင်ဆောင်နေတဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ်ပြား (မှတ်ပုံတင်တွေကဒ်)တွေနေရာမှာ Smart Card တွေနဲ့ အစားထိုးပြောင်းလဲပေးဖို့ အစိုးရမှာ အစီစဉ်ရှိတယ်လို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အဆောက်ဦးထဲ မှာ မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင် စာရင်းကောက်ယူရေးဆိုင်ရာ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အပြီးမှာ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီကို RFA က မေးမြန်းရာမှာ အခုလိုပြောခဲ့တာပါ။
“ဒါတွေက ငွေကြေးရင်းနှီးပြီးတော့ နိုင်ငံတကာ ပညာရှင်တွေက လုပ်ရတာဖြစ်တယ်၊ ကျနော်တို့ဆီကို တင်ပြတဲ့ဟာတွေ တစ်ယောက်ချင်းဆီကို ခေါ်နားထောင်တယ်၊ သူကဘယ်အဆင့်လုပ်၊ သူကဘယ်လိုလုပ်တယ်၊ အဲဒီအပေါ်မူတည်ပြီးတော့ တကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ တင်ဒါစနစ်နဲ့ ခေါ်ရွေးရမယ်၊ အနည်းဆုံးပေးနိုင်တဲ့သူနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကို ရွေးမှာပါ၊ ဒီစနစ်က မလုပ်လို့မရဘူးလေ”
နှစ်ပေါင်းများစွာ စက္ကူကတ်ပြားတွေနဲ့ အသုံးပြုလာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွေနေရာမှာ smart card တွေနဲ့ ပြောင်းလဲအစားထိုးသွားမှာဖြစ်ပေမဲ့ ထုတ်ပေးမယ့်အချိန်ကာလ အတိကျကိုတော့ မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ ဝန်ကြီးကဆိုပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်ထိ အစိုးရအနေနဲ့ မိုးပွင့်စီမံကိန်းဆိုပြီး နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားတွေကို ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီရဲ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ကိုမျိုးဇော်ကိုက တင်ပြထားပါတယ်။
Which mean that more Islamic and Chinese will be gotten this fake ID and it will result in more problems, conflicts and more civil wars.
Aug 09, 2014 08:17 PM
As long as the 2008 constitution is not changed, nothing can be made right. Because most of the real citizens are still labelled as suspicious citizens (according to their Bogyoke's rules) they will never get the smart card or what so ever. Especially "Corruption" is still there too.
“မိုးပွင့်စီမံကိန်း” မှသည် “ပေါချောင်ကောင်းစီမံကိန်း” သို့ ..။ “မိုးပွင့်စီမံကိန်း” အရ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားကို ပြည်တွင်းမှာ အတုလုပ်သည်။ “ပေါချောင်ကောင်းစီမံကိန်း” အရ smart card ကို ပြည်ပမှာ အတုလုပ်ပါလိမ့်မည်။ (သတိရှိပါ ဦးခင်ရီ)
Sep 17, 2013 04:53 PM
Sep 18, 2013 04:41 AM
“မိုးပွင့်စီမံကိန်း” ဆိုတာ “ခေါင်က မလုံ“တဲ့သဘောပါ။ (သိတယ် နော် ..)
Sep 17, 2013 04:48 PM
That action need to do as fast as possible. The whole world have completed, only us left. Hurry up!!